လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က ၁၀တန်းကို သတိရမိခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က ၁၀တန်းကို သတိရမိခြင်း
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က ၁၀တန်းကို သတိရမိခြင်း
Posted by ဦးသု on Nov 16, 2012 in Creative Writing | 25 comments
အော့ကြောလန် ကျွန်တော်နှင့် ပြင်လို့မရသောနောင်တရမိသော အမှတ်စာရင်း
“၃လပြတ် ရှယ်ဝိုင်း” တဲ့ အဲဒီ ဓာတ်တိုင်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးကိုမြင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ၁၀တန်းတုန်းက ဆိုးခဲ့ပေခဲ့ တာလေးတွေကိုသွားသတိရမိတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်ကပေါ့ ကျွန်တော်တို့ ၉တန်းလောက်မှာ ဝိဇ္ဇာတွေ သိပံ္ပတွေ အီကိုတွေခွဲ တဲ့ နှစ်ဖြစ်သွားတယ် ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်က ၉တန်းမှာ သိပ္ပံ ယူပြီး ၁၀ တန်းကျတော့ အီကို ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီလို ကိုးတန်းနဲ့ ဆယ်တန်းကြားမှာ တင် ဟိုအပင်ဒီအပင်ကူးလာတဲ့ကောင်ဖြစ်နေတော့ ဆယ်တန်းကျတော့လဲ အဲဒီသောက်ကျင့်ကမပျောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဆယ်တန်းမှာ ကျွန်တော်တို့တက်ရတဲ့ကျူရှင်က ရှယ်ဝိုင်းနဲ့ ရိုးရိုးဝိုင်းဆိုပြီးရှိတယ် ။ ကျွန်တော်က ရိုးရိုးဝိုင်းပဲတက်တယ် ရှယ်ဝိုင်းတက်တဲ့ကောင်တွေက စာကျက်အားမရှိလို့ ဘာညာဆိုပြီး အမေ့ကိုပြောပြီး ပြေးပေါက်ချောင်တဲ့ ရိုးရိုးဝိုင်မှာတင် ကျောင်းက အတန်းထဲမှာလဲ အော့ကြောလန်နေကျ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကျူရှင်မှာလဲ မွှေကြော်တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ နောက်ပြီး repeater သမားတွေနဲ့ ကျူရှင်မှာသွားပေါင်းမိတော့ ကိုတန်းကတည်းက ကျင့်ယူလာတဲ့ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အကျင့်က ၁၀တန်းမှာ ဖင်ကမီးခိုးထွက်ပါလေရော။ အဲဒါတင်မကသေး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်မှာလဲ သူ့ဦးလေးက အပေါင်းအသင်းတော်တော်ဆန့်ပုံရတယ် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ ဖဲဝိုင်းလေးကိုဖြစ်လို့ သူငယ်ချင်းရဲ့ဦးလေးက ဘီအီးလေးတွတ်လိုက် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ဖဲလေးဝင်ရိုက်လိုက်နဲ့ အဲဒီအိမ်မှာ ကျူရှင်လစ်ပြီးတော်တော်ကိုအိုကေနေတာ ။ နောက်ပြီးဖဲဝိုင်းမရှိရင် ကျွန်တော်နေတဲ့ တာမွေကနေ ရထားစီးပြီး မယ်လမု ဘုရားဘက်ကို ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းဆိုးပေအဖွဲ့ ၃၊ ၄ယောက် ပျော်ပွဲစားတောင်ထွက်လိုက်သေး ဘုရားမှာဆေးလိပ်သောက် ဟိုဘက်ကမ်းကိုလစ် သူငယ်ချင်းအိမ်မှာဖဲဝိုင်းဖြစ်ရင် ဖဲလေးရိုက် ညနေ လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နဲ့ ကျူရှင်လစာသုံးလစာ မပေးပဲနဲ့ ပြောင်ပါလေရော။ အဲဒီတုန်းက တစ်ဘာသာတစ်ထောင်နဲ့ ခြောက်ဘာသာခြောက်ထောင်သုံးလစာသောင်းရှစ်ထောင် ဘယ်နားကုန်လို့ကုန်သွားမှန်းမသိ ဒါတောင် ၁၅၀၀၀ တန် ရှယ်ဝိုင်းများသွားတက်မိရင် ၄၅၀၀၀ တောင်ပြောင်အုံးမှာ။ အဲလိုနဲ့ ကျူရှင်လခလဲ ဆရာက နို့တစ် ဘုတ်မှာ ၃လမပေးရသေးဆိုပြီး နာမည်တင်ထားတော့ ကျွန်တော်လဲ “အမေရေ ဒီကျူရှင်ကအသင်အပြမကောင်းဘူး လူအများကြီးနဲ့ဆိုတော့စာမလိုက်နိုင်ဘူး” ဆိုပြီး နောက်တစ်ဘိ ကိုပြောင်းဖို့ အမေဆီ အပူကပ်ရပီပေါ။့ မိဘ ကလဲ ကိုယ့်သားသမီးကိုဘယ်လောက်စိတ်ချသလဲဆိုရင် အင်းဆိုပြီး တစ်ခွန်းပဲ ဆရာ့ဆီတောင်လိုက်မမေးတော့ပါဘူးကျွန်တော့်အခြေအနေကို နောက်ထပ်ရှယ်စာသင်စာကျက်ဝိုင်းဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်ကပ်ထားတဲ့ ဆီကို ဒိုးခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြောမယ့်သာပြောရတာ ကျွန်တော်ကျူရှင် ၃လစာ မပေးပဲ ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ ကျူရှင်က ဆရာက ကျွန်တော်တို့ ၈တန်းကတည်းကသင်ပေးခဲ့တာ သင်္ချာမှာနာမည်ကြီး ကျွန်တော်တို့တာမွေတစ်မြို့နယ်လုံးမှာပေါ့။
နောက်ကျူရှင် ရှယ်ဝိုင်းတစ်ခုကိုစပြီးခြေလှမ်းပြင်ပါပြီ ။ ကျွန်တော်ဘယ်လောက်နာမည်ကြီးနေလဲဆိုရင် အဲဒီကျူရှင်မှာ ရှယ်ရှယ် ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုရှယ်တဲ့ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား တက်နေတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက် ဆို အဲဒီကျူရှင်ကနေ ကျွန်တော်ထွက်မှပဲ အဲဒီမှာတူတူတက်နေမှန်းသိရတယ်။ ကျွန်တော် လိုက်စနေရင် စာကျက်လို့မရမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ကျွန်တော်ကျူရှင်ပေါ်တက်လာတာနဲ့ အဲဒီတိုက်ခန်းက အိပ်ခန်းထဲဝင်ပြီး စာကျက်ရတယ် ကျွန်တော် လိုက်စမှာစိုးလို့တဲ့။အော်..အော်..ဖြစ်ပုံ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဲဒီကျူရှင်ကိုမသွားခင် အော့ကြောလန် ဆိုတာနာမည်ကြီးပြီးသားဆိုတာ အမေသာမသိတယ် အဲဒီကလူတွေအကုန်သိ။ အဲဒီကျူရှင်မှာလဲ အရင်ကျူရှင်လိုပါပဲ နဂိုအဲဒီမှာ အော်ရင်ဂျင်နယ် အော်ကြောလန်တွေ က ကျွန်တော်လဲရောက်ရော စပါယ်ရှယ်အော့ကြောလန်တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
ဆက်ပါအုံးမယ် စောင့်ကြည့်ဖတ်ရှုပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ခင်ဗျား။
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်ကပေါ့ ကျွန်တော်တို့ ၉တန်းလောက်မှာ ဝိဇ္ဇာတွေ သိပံ္ပတွေ အီကိုတွေခွဲ တဲ့ နှစ်ဖြစ်သွားတယ် ။
ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော် နှစ်တူတူပဲဗျ …
အစ်ကိုကြီးအင်ဇာဂီနဲ့ အစ်ကိုကြီးမင်းသူတို့က (၁၀)တန်းအောင်တာ (၁၀)နှစ်ပြည့်သွားပီဆိုတော့…ဟိဟိ
10 တန်းအောင်တာ ၂၀၀၂ မဟုတ်ဘူးလေ အဲဒီအချိန်က ဖြေမလို့ကျူရှင်တက်တုန်းလေ ၂၀၀၃ မှာဖြေပြီး ၂၀၀၄ မှာ ဒဂုံက ဘူမိကို ယောင်လည်လည် နဲ့ရောက်သွားတာ
( အမေရေ ဒီကျူရှင်ကအသင်အပြမကောင်းဘူး လူအများကြီးနဲ့ဆိုတော့စာမလိုက်နိုင်ဘူး )
ပြောပုံလေးကတော့ သင်းလိုက်လေ ကိုသုဝေရေ။ အမှန်တော့ စာမလိုက်နိုင်တာ ကိုသုဝေ ပတ်ပြေးနေလို့ လိုက်ရမယ့်စာက မူးပြီးမှောက်ကျန်ခဲ့တာကို အမေမသိခဲ့ရှာဘူးနော်။
juu juu ထက်တော့တစ်နှစ်ကြီးတာကိုး ၁၀တန်းတုန်းက အိမ်အပေါ်ထပ်အခန်းထဲမှာ ထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်ရင် စာအုပ် ဘေးချပြီးခဏခဏအိပ်ပျော်ဖူးလို့ စော်ပလော်တီးခံရတာကိုတော့ မမေ့ဘူး အဲတုန်းကသာနည်းနည်းလောက်လေးပိုကြိုးစားခဲ့ရင်အခုဆို ဆရာဝန်မကြီးဖြစ်နေရော့မယ်။ ကိုသုဝေရေ ပြန်တွေးတိုင်း နောင်တ နည်းနည်းတော့ရမိပါတယ် အဟုတ်ပါ
ဟုတ်လား ဂျူးဂျူး… အဲဒါဆို ကျွန်တော့်ထက် (၄)နှစ်တောင်ကြီးတာပေါ့…
ဒို့တော့ လွန်ခဲ့သော ၃၀ နှစ်ခန့်က ၁၀တန်းကို သတိရမိခြင်း
ရွာထဲ မှာ ကြောင်ဝဝတုတ်တုတ်ကြီးလေ သူငယ်ပါတယ်ဆိုတာကို ငယ်ညောင်…..ငယ်ညောင်ဆိုပြီးပတ်အော်နေတယ် :harr:
ဆယ်တန်းအကြောင်းမပြောနဲ့စိတ်နာတယ်……………………….
လွန်ခဲ့သော .၁၉ ရာစု နှစ်ကျော်ကျော် က ၁၀-တန်းကို သတိရလိုက်တာ..
သေမင်းကြားမှာစိုးလို့ ယောင်လည်လည်လေး ပေါ့ …
ုKo Thu Wai ပြောမှာ တို့လည်း ၁၀ တန်းကျူရှင်ကိုပြန်သတိရလာပြီ
တက္ကသိုလ်တက်ရတာတောင် ၁၀ တန်းလောက်မပျော်ခဲ့ဘူး ……
၂၀၀၃ အောင်တာဆိုတော့ အနော့်ထက် ၃ နှစ်ကြီးတယ်…
နှစ်ချင်းပေါက်အောင်တဲ့ စပယ်ရှယ်အော်ကြော့လန်အကြောင်းကို ဆက်လက်စောင့်မျှော်နေပါတယ်…
နန်းတော်ရာသူက ၂၀၀၀ အောင်တာလေ။
၂၀၀၂ မှာ ၀ိဇ္ဇာ/သိပ္ပံ ခွဲတာမို့လား။
မွန်မွန်က အစ်မထက် ၆နှစ်လောက်ငယ်တာပေါ့။
အနော်က ၂၀၀၆ မှာ ဆယ်တန်းအောင်ပါတယ်ဗျ…
ကျုပ်ဖြင့် ၁၀တန်းကျောင်းသားဘဝ ဆိုတာ ဘာမှန်းကို အတိအကျကို မမှတ်မိတော့ပါဘူးဗျာ
ကျနော်က တော့ ပထမဆုံးအကြိမ် တက္ကသိုလ်စာပေးစာယူသင်တန်း(အခုအဝေးသင်)စဖွင့်တဲ့နှစ်မှာ
ကျနော်တို့ ဆယ်တန်းဖြေရတဲ့နှစ်က ဒီနေ့စာမေးပွဲအပြီး နက်ဖြန်သင်္ကြန်ကျတာဘဲ၊
ကဲ 19?????????????????? ခုနှစ်လဲဗျူို့
တိန် ဒါဖြင့် ကိုပေါက်ကိုပေါက်နဲ့ခေါ်နေတာ ကန်တော့ပါရဲ့